उबन्टु स्थापना गर्न के अल्ट्राबुक Ubunlog
उबन्टु स्थापना गर्न कुन अल्ट्राबुक
उबुन्टु सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्पहरू मध्ये एक भएको छ Gnu / Linux को लागी विन्डोज वा म्याकोस परिवर्तन गर्न चाहने प्रयोगकर्ताहरूमा। यसको प्रयोगको सहजताका साथै यसको सबैभन्दा हालको सफ्टवेयरले करोडौं प्रयोगकर्ताहरू बनाउँछ जसले उबन्टु वा यसको कम्प्युटरको लागि यसको आधिकारिक स्वाद प्रयोग गर्दछ।
तर यो सरल कम्प्युटरहरू होइन जुन हामी विश्लेषण गर्न गइरहेका छौं तर बिरलै मात्र लोकप्रिय तर वैकल्पिक विकल्प हालका महिनाहरूमा Gnu / Linux विश्वमा उबुन्टुले उत्पादन गरेको जस्तै अप्ठ्यारो हो, यी कम्प्युटरहरूलाई अल्ट्राबुक भनिएको छ।
Ultrabooks नोटबुक हो जुन १ किलोग्राम भन्दा कम तौलको हुन्छ तर तिनीहरूले उनीहरूका लाभहरू कम गर्दैनन् तर बिल्कुल विपरीत। यसैले, अल्ट्राबुकहरू तिनीहरूसँग शक्तिशाली प्रोसेसरहरू छन्, ठूलो मात्रामा आन्तरिक भण्डारण, निष्क्रिय कूलि and र घण्टा र स्वायत्तताको घण्टा।
अर्को हामी तपाईंलाई आवश्यकताहरू वा हार्डवेयरको बारेमा कुरा गर्नेछौं यदि हामी उबन्टु स्थापना गर्न अल्ट्राबुक बुकिook गर्न वा प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने हामीले के हेर्नु पर्छ। यो पूर्वनिर्धारितद्वारा स्थापित छ वा छैन।
1 सीपीयू र जीपीयू
4 SSD डिस्क
8 छनौटहरू जुनमा अल्ट्राबुक किन्नु पर्दछ
9 र कुन अल्ट्राबुक तपाईले छान्नुहुन्छ?
सीपीयू र जीपीयू
हामीले भन्नुपर्दछ कि विपुलमा कम्प्युटरमा उबुन्टु स्थापना गर्न CPU कहिल्यै ठूलो समस्या भएन। तर -२-बिट आर्किटेक्चरको बारेमा पछिल्लो खबर पछि, अल्ट्राबुकहरू जुन डुअल-कोर वा -२-बिट प्रोसेसर हुन्छ उबन्टुको लागि अल्ट्राबुकको खरीद गर्दा हामीले छनौट गर्नुपर्दछ। मलाई यी कुरा भन्न मनपर्दैन, तर यो सत्य हो कि इंटेल CPUs ल्यापटपको लागि AMD CPUs भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यसैले i5, i3 वा i7 प्रोसेसर अल्ट्राबुकको लागि राम्रो विकल्प हुनेछ र उबुन्टुसँग उपयुक्त.
GPU वा ग्राफिक्स कार्डमा (सबै भन्दा पहिले निपुणका लागि पछि), सबै स्थापना र / वा उबुन्टु प्रयोग गर्न आदर्श हुँदैन। भर्खरको Nvidia ड्राइभर मुद्दाहरु एएमडी को एटीआई र इंटेल GPU Ubuntu को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प बनाउन। यी ब्रान्डहरूका ड्राइभरहरू सही रूपमा र उबन्टुसँग धेरै राम्रोसँग काम गर्छन् तर यो सत्य हो कि Nvidia GPUs शक्तिशाली छन्।
र्यामलाई अलब्राबुकमा उबुन्टु स्थापना गर्न समस्या हुनुहुन्न। उबुन्टुले धेरै र्याम मेमोरी उपभोग गर्दैन र मुख्य संस्करणको लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा हामी प्रकाश डेस्कटपहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं जस्तै Lxde, Xfce वा Icwm। जे भए पनि, यदि हामी हाम्रो अल्ट्राबुकको लागि वर्षौंसम्म उब्न्टुको मुख्य संस्करण प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने, हामीसँग कम्तिमा G Gb भेडा वा उच्च हुनुपर्छ। अधिक मात्रा, अधिकतम प्रदर्शनको साथ जीवनको वर्षहरू। हामीले यो पनि नोट गर्नुपर्दछ सित्तैं र्याम मेमोरी स्लटहरू छन्, यसले अल्ट्राबुकको लामो आयु हुने सम्भावनाहरूलाई विस्तार गर्ने छ, यद्यपि त्यहाँ केही मोडेलहरू छन् जसले यी सम्भावनाहरू प्रस्ताव गर्दछ।
स्क्रिन ल्यापटपको एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो, यो अल्ट्राबुक, नेटबुक वा सामान्य ल्यापटप हो। अल्ट्राबुक स्क्रिनको औसत आकार १ inches इन्च छ। एउटा रोचक आकार जसले कम्प्युटरलाई पहिलेभन्दा धेरै पोर्टेबल बनाउँदछ, तर मानक १-इन्च आकार अझै राम्रो विकल्प हो। यस अवस्थामा, छनौट गर्नुहोस् एलईडी टेक्नोलोजी संग एक पर्दा एक सिफारिश विकल्प होकम से कम यदि हामी हाम्रो अल्ट्राबुकको महान स्वायत्तता चाहान्छौं भने।
न्यूनतम स्क्रीन रिजोलुसन १1366 × 768 p पिक्सल वा सोभन्दा बढी हुने थियो। टच टेक्नोलोजी उबन्टुसँग उपयुक्त छ, अर्थात हामीसँग उबन्टुसँग टच स्क्रिन हुन सक्छ यद्यपि यो सत्य हो कि क्यानोनिकलको अपरेटिंग सिस्टममा यस टेक्नोलोजीको धेरै विकास भएको छैन, न त वेल्याण्ड जस्ता ग्राफिक्स सफ्टवेयर नै छ। जे भए पनि सामान्य मोडले राम्रोसँग काम गर्दछ।
यदि हामी उबन्टु संग एक महान अल्ट्राबुक चाहिन्छ हामीले ssd डिस्क भएको टोली खोज्नु पर्छ। कम से कम परम्परागत ड्राइभको तुलनामा जब एक एसएसडी हार्ड ड्राइवको प्रदर्शन अद्भुत छ, र उबुन्टु यस टेक्नोलोजीसँग पूर्ण रूपले उपयुक्त छ। तर, म व्यक्तिगत रूपमा शुद्ध एसएसडी हार्ड ड्राइभ विकल्प रोज्न सिफारिस गर्दछु, किनकि मिश्रित समाधानको साथ अल्ट्राबुकहरू छन् जसले तपाईंलाई ठूलो आन्तरिक भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ, तर प्रदर्शन खराब छ। हार्ड डिस्कको सर्तमा हामीले गर्न सक्ने क्षमता १२० जीबीको हुनुपर्दछ, कम कागजातहरू आफ्नै कागजातहरू र उबुन्टु फाईलहरू भण्डारण गर्न अपर्याप्त हुन्छ।
दुबै टेक्नोलोजीहरू उबन्टुमा सही रूपमा काम गर्दछन्, तर पहिलो दोस्रो भन्दा बढी कुशल छ र अधिक स्वायत्तता दिन्छ।
ब्याट्री एक अल्ट्राबुक र कुनै पनि ल्यापटप को लागी एक महत्वपूर्ण बिन्दु हो। यति धेरै कि उबन्टुले महान उर्जा प्रबन्धन गर्दछ, स्वामित्व अपरेटिंग प्रणालीहरू भन्दा घण्टा बढी प्रदान गर्दछ। A Wh० WHR ब्याट्री १२ घण्टा स्वायत्तता प्रदान गर्न पर्याप्त छयद्यपि सबै कुरा प्रयोगमा निर्भर हुन्छ जुन हामी टीमलाई दिन्छौं। यहाँ उस्तै कुरा छैन जुन हामी उबन्टु वा विन्डोज प्रयोग गर्छौं, यदि हामी स्रोतहरू खपत गर्ने अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्छौं भने यसले अधिक ब्याट्री प्रयोग गर्दछ र विस्तारमा हामीसँग कम स्वायत्तता हुनेछ।
ती १२ घण्टा स्वायत्तता कायम गर्न हामीले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि हामीले प्रयोग नगरेको जडान (एनएफसी, ब्लुटुथ, वायरलेस, आदि ...) असक्षम गरिएको छ। स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको चार्जिंग पनि उपकरणमा निस्क्रिय पार्नु पर्छ वा हामीसँग गर्नुपर्दैन किनकि यसले उपकरणको स्वायत्तता कम गर्दछ।
सामान्यतया, अल्ट्राबुकमा सीमित संख्यामा यूएसबी पोर्ट र स्लटहरू हुन्छन्, जुन राम्रो छ किनकि यसले उपकरणहरूको स्वायत्तता बढाउँछ र पनि हामी उबन्टु मार्फत एलिमेन्टहरू निष्क्रिय गर्न सक्दछौं ताकि जब हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दैनौं तिनीहरू निष्क्रिय हुन्छन् र लामो ब्याट्री जीवन कायम छ।
अल्ट्राबुकमा सामान्यतया धेरै बहु-टेक्नोलोजी पोर्टहरू वा डीभीडी-रोम ड्राइभ हुँदैन, तिनीहरूलाई अधिक कम्प्याक्ट, हल्का र बढी आत्म-समावेश बनाउँदछ। यसैले हामीले यसलाई विभिन्न प्रकारका कनेक्टिभेटिलाई होशियारीपूर्वक हेर्नु पर्छ। कम्तिमा दुई USB पोर्टहरू आवश्यक छ साथ साथै एक वायरलेस जडान। यदि हामी उबन्टुसँग एक शक्तिशाली अल्ट्राबुक चाहन्छौं भने हामीसँग ब्लुटुथ जडान हुनुपर्दछ, NFC, USB पोर्टहरू प्रकार C हुनुपर्दछ र कम्तिमा माइक्रोस्ड कार्डहरूको लागि स्लट हुनुपर्दछ।। धेरै कम्प्युटरहरूले यी परिसरहरू पूरा गर्छन् र उबुन्टुसँग उपयुक्त छन्।
अल्ट्राबुकको मूल्य एकदम उच्च छ, यद्यपि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि हालको महिनाहरूमा उनीहरूको औसत मूल्यमा खासै गिरावट आएको छ। हामी हाल फेला पार्न सक्छौं bu०० यूरो को लागी उबुन्टु संग एक राम्रो ultrabook संगत। यो सत्य हो कि त्यहाँ धेरै महँगो विकल्पहरू छन् प्रसिद्ध डेल एक्सपीएस १ 13 जसको मूल्य १००० यूरो भन्दा बढी छ, तर हामी युएभीबाट ul०० युरोमा नपुग्ने अल्ट्राबुक पनि भेट्टाउँछौं। र अन्य अपरेटि systems प्रणालीहरूको विपरित, त्यहाँ अल्ट्राबुकहरू छन् जुन उबुन्टुसँग डिफल्ट अपरेटिंग सिस्टमको रूपमा बेचिन्छ जुन उपकरणको मूल्य बढाउँदैन। जे भए पनि, यदि हामी विन्डोजको साथ अल्ट्राबुकको लागि छनौट गर्छौं भने हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन उबुन्टु स्थापना यो उपकरणको यस प्रकार मा धेरै सरल छ।
छनौटहरू जुनमा अल्ट्राबुक किन्नु पर्दछ
त्यहाँ अधिक र अधिक अलब्राबुक पुस्तक मोडेलहरू छन्। मा आधिकारिक उबन्टु वेबसाइट हामी उबंटुसँग मिल्दो हार्डवेयर विकास गर्न क्यानोनिकलमा प्रतिबद्ध कम्पनीहरूको सूची फेला पार्न सक्छौं। पनि, मा FSF वेबसाइट हामी हार्डवेयर पाउन सक्दछौं जुन सित्तैमा नि: शुल्क ड्राइभरहरू समर्थन गर्दछ वा उब्न्टुसँग उपयुक्त छ। यदि हामीले यी दुई सन्दर्भ छोड्यौं भने हामीले उबन्टुसँग पहिलो अल्ट्राबुकहरू लिनुपर्नेछ। यसमा शर्त लगाउने पहिलो कम्पनी डेल थियो जसले डेल एक्सपीएस १ 13 लाई विकसित गर्न शुरू गर्यो, जुन उबन्टुसँग पूर्वनिर्धारित अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा एक अल्ट्राबुक थियो। यद्यपि यस उपकरणको मूल्य ज्यादै उच्च थियो र सबैका लागि उपलब्ध थिएन, अझ त्यस भन्दा पनि जब अल्ट्राबुकहरू त्यति लोकप्रिय थिएनन्।
पछि, प्रोजेक्टहरू जन्मिए जुन मकबुक एयरलाई उबन्टुसँग एक अल्ट्राबुकमा रूपान्तरण गर्दछ, बाँकी विकल्पहरू रहेका कारण मेरो दृष्टिकोणबाट सिफारिस गरिएको छैन।
अल्ट्राबुकहरू पनि देखा परे जुन विन्डोजको साथ आएको थियो तर असूस जेनबुक जस्ता उबुन्टुसँग पूर्ण रूपले उपयुक्त छ। यी अल्ट्राबुकको सफलताले युवा कम्पनीहरूले उबुन्टुमा उनीहरूको हार्डवेयरको लागि एक अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा शर्त लगायो प्रणाली and 76 र स्लिमबुकले Gnu / लिनक्स र उबुन्टुसँग मिल्दो अल्ट्राबुकहरू सिर्जना गर्‍यो। प्रणाली 76 को मामला मा हामी संग तपाइँको जोखिमपूर्ण शर्त तपाइँको कम्प्युटर को लागी उबन्टु को एक पूर्ण अनुकूलित संस्करण को सिर्जना संग छ।
Slimbook को मामला मा, तिनीहरूले कटाना र एक्सालिबुर सिर्जना गरेका छन्, Ubuntu संग पूर्ण रूपले अनुकूल अल्ट्राबुकहरु र त्यो केडीई नियॉनको साथ आउँछ पूर्वनिर्धारित अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा। त्यहाँ कम्पनी पनि छ VANT, Slimbook जस्तो स्पेनिश मूलको कि उचित मूल्यको लागि उबन्टुसँग अल्ट्राबुकहरू प्रस्ताव गर्दछ। स्लिमबुक विपरीत, VANT सँग कन्फिरेसनल हार्डवेयरको साथ धेरै अल्ट्राबुक पुस्तकहरू छन्।
र कुन अल्ट्राबुक तपाईले छान्नुहुन्छ?
यस बिन्दुमा तपाई पक्कै छक्क पर्नुहुनेछ कि कुन अल्ट्राबुक म रोज्ने छु। सबै विकल्पहरू राम्रो छन्, उबुन्टु वा विन्डोजको साथ आउँनुहोस्। सामान्यतया, कुनै पनि विकल्प राम्रो छ यदि हामीले प्रत्येक बुँदाको सल्लाहलाई ध्यानमा राख्यौं भने। व्यक्तिगत रूपमा म म्याकबुक एयरको परिवर्तन गर्दिन किनकि यदि हामी यो उपकरण खरीद गर्छौं भने यसलाई म्याकओएस हुनु पर्छयसैले म्याकबुक एयर जस्तो कम्प्युटरमा पैसा खर्च गर्नु भन्दा अर्को अल्ट्राबुकको लागि अप्ट इन गर्नु राम्रो हुन्छ र त्यसपछि यसको सफ्टवेयर हटाउनुहोस्।
उपकरणको समीक्षा गर्ने धेरै वेबसाइटहरूले उपकरणको उच्च कुरा गर्छन् स्लिमबुक र यूएभी, यसको हार्डवेयर धेरै राम्रो छ यद्यपि मैले यसलाई व्यक्तिगत रूपमा परीक्षण गरेको छैन कम्पनीहरू नि: शुल्क सफ्टवेयर प्रतिबद्ध छन्, जसले उनीहरूको हार्डवेयरलाई ठूलो समर्थन दिन्छ। तर यदि उबुन्टुसँग अल्ट्राबुकको लागि पैसा ठूलो दोष हो भने, विन्डोजको साथ अल्ट्राबुकको विकल्प र यसमा उबुन्टु स्थापना गर्न सिफारिश गरिएको भन्दा बढी हुन्छ।
तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, अल्ट्राबुकहरू र उबुन्टु राम्ररी सँगसँगै जान्छन्, यद्यपि केही विन्डोज प्रयोगकर्ताहरू यसलाई स्वीकार्न चाहँदैनन्। तर तपाई कुन अल्ट्राबुक को छान्नुहुन्छ? के तपाइँसँग उबन्टुसँग अल्ट्राबुक छ? तपाईको अनुभव के हो?
लेखको पूर्ण मार्ग: Ubunlog » Ubuntu » उबन्टु स्थापना गर्न कुन अल्ट्राबुक
म त्यो थप्न सक्छु डेस्कटप वातावरण को चयन मा, PLASMA 5, वर्तमान मा .5.12.5.१२. highly अत्यधिक अनुकूलित छ र लगभग माथि उल्लिखित डेस्कटप भन्दा मेमोरी उपभोग संग बराबर हो, लगभग 450० MB को र्यामको साथ प्रणाली सुरू गर्दछ।
यसको संस्करण of को उच्च मेमोरी खपतका साथ केही गर्नुपर्दैन।
जोसकाटलाई जवाफ दिनुहोस्
जोन फ्रान्सेस्क भन्यो
ठीक छ, मसँग एक Slimbook छ: https://slimbook.es/ र म धेरै खुसी छु।
जोन फ्रान्सेस्कलाई जवाफ दिनुहोस्
लुइस एडुआर्डो हेरेरा भन्यो
ASUS Zenbook उबन्टुसँग पूर्ण रूपले उपयुक्त छ। मेरो विशेष केसमा, अपरेटिंग प्रणालीको लागि सानो SSD र कागजातहरूको लागि ठूलो HD सहित, जुन सुरूमा माउन्ट हुन्छ। बुट एकदम छिटो छ र त्यहाँ ड्राइभर वा असंगतिहरूसँग कुनै समस्या छैन।
लुइस एडुआर्डो हेर्रेलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग स्लिमबुक कटाना द्वितीय छ र म पनि धेरै खुसी छु
मसँग एक asus ux501 छ र यसले ubuntu १.18.04.०15.10 स्थापना गर्न सक्दैन। उबुन्टुको एक मात्र संस्करण जसले तपाईंलाई यो स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ १ 18.04.१०, त्यहाँबाट तपाईं अद्यावधिक गर्न थाल्नुहुन्छ जब सम्म तपाईं संस्करण १ XNUMX.०XNUMX सम्म प्राप्त गर्नुहुन्न (मेरो मामलामा म यसलाई डेस्कटपको रूपमा एकता छोड्दै अपडेट गर्दछु)।
जो व्यक्ति यसलाई स्थापना गर्न चाहन्छन्, उनीहरूले यसलाई अर्को ल्यापटप वा ल्यापटपमा स्थापना गर्न सक्दछन् र त्यसपछि प्रतिलिपि गर्न वा डिस्कलाई Asus Zenbook मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
कर्लोलाई जवाफ दिनुहोस्
पेपे बोतल भन्यो
मेरो अनुभवबाट यदि तपाइँ ल्यापटपलाई टेक्निकल सेवामा फेरि पठाउन चाहानुहुन्छ र फेरि स्लिमबुक खरीद गर्नुहोस्, कुनै श any्का बिना।
पेपे बोटेलालाई जवाफ दिनुहोस्
जुआन अल्का भन्यो
जुआन अल्कालाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, डेलको पृष्ठमा XPS १ 13 छ, उबुन्टु पूर्व-स्थापितको साथ। मैले यस उपकरणमा राम्रो सन्दर्भहरू सुनेको छु, धेरै हल्का र शक्तिशाली।
Andino लाई जवाफ दिनुहोस्
लेख खराब छैन, तर तपाईं UAV र Slimbook उल्लेख गर्न बिर्सनुभयो… शीर्षकमा। "प्रायोजित पोष्ट" विज्ञापनले चोट पुर्‍याउँदैन।
EU लाई जवाफ दिनुहोस्
यहाँ एक सियाओमी एयर 12,5 उबन्टु १.18.04.०XNUMX को साथ खुशी छ
भान्ट १ र अधिक छैन। तिनीहरूसँग १ अल्ट्राबुक मात्र छ र ब्याट्री hours घण्टा वा कम चलाउँदछ।
म प्राय: समर्थनको लागि स्पेनिश कम्पनीहरूबाट किन्न रुचाउँछु, तर यस अवस्थामा उनीहरूले चार्ज लिदैन किनभने उनीहरू भन्छन कि यो सामान्य छ कि उनीहरूको अल्ट्राबुकको ब्याट्री मात्र hours घण्टा रहन्छ।
Mkas लाई जवाफ दिनुहोस्
उत्कृष्ट सन्दर्भ मित्र, र्यामको सम्बन्धमा, र ल्यापटप वा अल्ट्राबुक को छनौट गर्ने बारेमा अन्य लेखहरू पढ्नुहोस् र तिनीहरू 8 वा बढी भन्न यति विशिष्ट छैनन् यदि तपाईं टीम लामो समयसम्म सजिलैसँग चलाउन चाहानुहुन्छ भने उबन्टुको नयाँ संस्करणहरू। ,
लिनक्सको लागि डिजाइन गरिएको नोटबुकको जीवन र ब्याट्री जीवन के हो?
मैले यस टिप्पणीलाई छुट्टै राखें, किनकि म जान्न चाहन्छु कि प्रोग्राम गरिएको अप्रचलितताको मुद्दा नि: शुल्क सफ्टवेयरको लागि उन्मुख ब्रान्डमा कसरी छ।
नोटबुकको मुख्य समस्या भनेको ब्याट्रीमा चिप रहेको रिपोर्ट छ कि ब्याट्री कम चार्ज हुन्छ, उत्सुकतापूर्वक पहिलो ब्याट्री २ बर्षसम्म चल्छ, तर पछि प्राप्त गर्न सकिनेहरू months महिनासम्म पनि चल्दैन।
यदि तपाइँसँग यसलाई पोर्टेबल हुनको लागि खराब आवश्यकता छ भने, तपाइँले अर्को किन्नुपर्दछ।
मलाई थाहा छैन यदि उस्तै कुरा "लाइट" नोटबुकमा हुन्छ जसमा ब्याट्री भित्र हुन्छ, तर यदि तिनीहरूसँग चिप छ भने, यस्तो सम्भावना हुन्छ कि उनीहरूले काउन्टरमा मात्र कम चार्ज रिपोर्ट गरे, जस्तै प्रिन्टर कार्ट्रिजहरू कि तिनीहरू भर्न सक्दैन, आदि।
नियोजित अप्रचलितताको लागि विफलताको अर्को स्रोत चिप सोल्डरिंग हो।
बहाना त्यो हो कि सिसा एकदम प्रदूषणकारी छ, यसले रोमीहरूलाई बौलाहा बनायो, कल्पना गर्नुहोस्!
यस कारणले गर्दा यो निषेध गरिएको थियो, र अब चिप्स कमजोर गुणस्तरको मिश्रित वस्तुहरूको साथ मिलाइएको छ जुन कम समयको लागि रहन्छ, उपकरणहरूको जीवन छोटो बनाउँछ र त्यसैले अधिक फोहोर उत्पन्न गर्दछ। त्यो, हो, थोरै कम प्रदूषणकारी र कम पुन प्रयोगयोग्य। यो कुरा ईयू टोलीमा ह्यान्डल हुने नियमहरूमा कसरी छ?
लिनक्सोलाई जवाफ दिनुहोस्
एउटा अन्तिम टिप्पणी।
म विशाल माउसपेडहरू वा टचप्याडहरूलाई घृणा गर्दछु। तिनीहरू धेरै असजिलो हुन्छन्, जब तपाईं दुर्घटनात्मक रूपमा टाइप गरेर तिनीहरूलाई छुनुहुन्न, कर्सरले स्थानमा परिवर्तन गर्दछ मार्क गर्न र मेटाउने पनि एकले लेखेको कुरालाई। परिवर्तनको अन्डु गर्न र केहि पनि हराइरहेको छ कि छैन भनेर जाँच्ने एक समयको बर्बादीसँग (वा त्यहाँ केहि बाँकी रहेको छ जुन उद्देश्यमा हटाइएको थियो)।
तपाइँ तपाइँको लिनक्स नोटबुकको एर्गोनोमिक डिजाइनको बारेमा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ?
जर्ज अर्टिज भन्यो
मसँग रास्पबेरी पाई3बी + छ र म खुसी छु, म यसमा अस्खलित रूपमा काम गर्छु। NOOBs धेरै थोरै स्रोत खपत गर्दछ।
जर्ज अर्टिजलाई जवाफ दिनुहोस्
माउस र टचप्याड विकल्पहरूमा तपाईं प्रकार्य सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ जुन किबोर्डमा टाइप गर्दा टच प्यानल निष्क्रिय हुन्छ जबसम्म तपाईं दुर्घटनात्मक क्लिकहरू त्याग्न विचार गर्नुहुन्छ।
म एक Xiaomi Mi नोटबुक एयर १.13.3. English (२०१ 2017) लाई लिनक्स मिन्ट १ with .१ मुनि दालचिनीसँग प्रयोग गर्दछु, एक अंग्रेजी कुञ्जीपाटी र ठूलो टचप्याड प्यानलको साथ र ० शून्य समस्याहरू जब दिनको 19.1 घण्टा काम गर्दछ 😀
सबै भन्दा राम्रो। यो शट जस्तै जान्छ: ओ
डोस्टलाई जवाफ दिनुहोस्
मँ डेल वर्षौं को लागी प्रयोग गर्दैछु, यो डेस्कटप वा ल्यापटप र उत्कृष्ट अनुकूलता होस्। मँ अब २ एसर ल्यापटप प्रयोग गरिरहेको छु: AMD र Radeon को साथ एक, यो एक गेमर हुनु पर्छ। र अर्को इंटेल i2 7u, Nvida (म मोडेल मलाई याद छैन) को साथ।
इंटेल, यसले मलाई * बन्टु स्थापना गर्न मात्र अनुमति दिँदछ। फेडोरा र खुल्ला साथ, स्थापना समाप्त हुँदैन र यदि मैले यो नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दै पुनःस्टार्ट गरें भने, यसले सबै प्रोसेसर र ल्यापटप जमिन खपत गर्न थाल्छ। तर १ub.०18.04 पछि कुबन्टुसँग धेरै खुसी छ, अब १ 18.10.१०। जे भए पनि, यदि कसैलाई फेडोरा कसरी स्थापना गर्ने थाहा छ भने, म यसको कदर गर्छु।
एएमडीको साथ म यसलाई विन्डोज र उबुन्टुको साथ प्रयोग गर्दछु।
मसँग स्लिमबुक छ र म धेरै खुसी छु। यसमा मसँग आर्च लिनक्स छ
नमस्कार, मसँग एक Asus ZenBook UX410 छ years बर्षको लागि i5, पहिले Ubuntu १ with र अब Ubuntu १ with को साथ र यो उत्कृष्ट जाँदैछ। मलाई यो धेरै मन पर्छ कि मैले भर्खर मेरी छोरीलाई उही UX3UA को वर्तमान संस्करण खरीद गरें तर i16 को साथ र यसले ठूलो काम गर्दछ। म तिनीहरू दुबै क्लासिक ग्नोम डेस्कटपहरूको साथमा छु र तिनीहरू ब्याट्री लाइफ सहित सबै पक्षमा राम्ररी जान्छन्।
JMeter, भार परीक्षण गर्नुहोस् र उबन्टुबाट प्रदर्शन मापन गर्नुहोस्
उबुन्टुमा प्रत्येक डेस्कटपको साथ कुन पीडीएफ पाठक प्रयोग गर्ने?